အင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုလည်ပတ်ခြင်းများ - လူငယ်လူရွယ်များ၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၀၄) - Your Brain On Porn
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အင်တာနက်-related ပြဿနာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အပြောင်းအလဲတွေဟာ: ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (2004) ၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်
Cyberpsychol ပြုမူနေ။ 2004 Apr;7(2):207-30.
Boies SC1, Cooper ကတစ်, Osborne CS.
760 တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ဤစစ်တမ်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လေးပုံစံများအကြားအင်တာနက်က-related ပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုအတွက်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကျောင်းသားများကသူတို့အော့ဖ်လိုင်းဘဝကိုပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုပိုမိုချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်သူများသည်အင်တာနက်ကိုပိုမိုမှီခိုခဲ့ကြခြင်းနှင့်နိမ့်အော့ဖ်လိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာကဖော်ပြခဲ့သည်။ သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရှာသောကျောင်းသားများသည်ခိုင်ခံ့အော့ဖ်လိုင်းဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖျော်ဖြေရေးကိုသာရှာဖွေသူများသည်အော့ဖ်လိုင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသတင်းပို့ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အော့ဖ်လိုင်းလူမှုကူညီမှုတွင်အနိမ့်ဆုံးဖြေကြားသူများသည်လျော်ကြေးပေးသည့်အွန်လိုင်းအထောက်အပံ့ကိုမပေးခဲ့ကြပါ။ လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အွန်လိုင်းလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (OSA) တွင်ကျောင်းသားများပါ ၀ င်မှုရှိသော်လည်း အင်တာနက်ကိုကယုတ်လျော့လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အန္တရာယ်မှာပေါ်လာပေးဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုအပေါ်မှီခိုသူတွေကို။ စာရေးသူသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သက်ရောက်မှုများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။
Doi: 10.1089 / 109493104323024474